Progressive Voice Myanmar » The URGE: Voices of Women from Civil War
The URGE: Voices of Women from Civil War
March 5th, 2019 • Author: Women’s League of Burma • 1 minute read
The URGE: Voices of Women from Civil War” documentary was commissioned by the Women’s League of Burma to highlight how conflict in Burma is impacting the lives of mothers, wives and families who have lost family members in the ongoing civil war in the country. The film includes the voices of seven women who are from several different states including women who live in refugee camp along the Thai-Burma border. Through the documentary, the Women’s League of Burma is urging all those who are engaged in conflict to put an end to the armed conflict and buildasustainable peace towards federalism.
ဤဗီဒီယိုမှတ်တမ်းသည် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ရိုက်ကူးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပဋိပက္ခများကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရသော ပြည်သူလူထုများ၊ ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်၊ ရဲမေ၊ ဗိုလ်မှူးများ၏ မ်ိခင်များ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ရင်တွင်းခံစားချက်များကို ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုထဲတွင် ဒေသအသီးသီးမှ အမျိုးသမီး (၇) ဦး၏ အသံများပါဝင်ပြီး တစ်ချို့သော အမျိုးသမီးများမှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်ပဋိပက္ခ များရပ်တန့်ပြီး ပြည်သူလူထုများအတွက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ရှေ့ရှုပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဤဗီဒီယိုမှတ်တမ်း မှ တဆင့် တိုက်တွန်းထားပါသည်။